Waa Maxay Shaqada Iyo Masuuliyadda Gudoomiyaha Baarlamaanka JBM, Xildhibaanada JBM , Wasiirka Arimaha Gudaha iyo Dib-uheshiisinta iyo Wasaaradda Caddaaladda ee JBM? | SMC
Home WARARKA MAANTA Waa Maxay Shaqada Iyo Masuuliyadda Gudoomiyaha Baarlamaanka JBM, Xildhibaanada JBM , Wasiirka...
Waa Maxay Shaqada Iyo Masuuliyadda Gudoomiyaha Baarlamaanka JBM, Xildhibaanada JBM , Wasiirka Arimaha Gudaha iyo Dib-uheshiisinta iyo Wasaaradda Caddaaladda ee JBM?
Dad badan ayaa isweydiinaya su’aashaas kore, iyo xaaladda uu ku sugan yahay Gobolka Shabeelaha Hoose. Waxaa muuqata howlo badan oo aan siday shacabka Shabeelaha hoose ku rajo weynaayeen in uusan maamulka JBM sidii la rabay uga wax ugu qaban.
Shacbka Shabeelaha Hoose ma Balidoogle Danab ayaa xukunta? Aaway doorkii Gudoomiyaha Baarlamaanka JBM iyo Wasiiradii JBM oo u dhaartay in ummadda ay daacadnimo ugu adeegi doonaan. Doorkooda ma muuqdo runtii. Waxaa loo baahanyahay in ay ka dhexmuuqdaan goobaha dhibatada ka jirto. Isla markaasna ay howlgeliyaan saraakiisa iyo shaqaalaha kala duwan ee amaanka iyo nabadgalyada JBM. Shacabku wuxuu shaki galinayaa in laga xukumo Baydhabo ama Balidoogle? Maamul sidii lagu yaqaanay ma arkaan!
Seddex setimaan gudaheeda ugu yaraan seddex kiis oo kufsi ayaa ka dhacay gobolka Shabeelaa hoose. Kuwaas oo maamulka JBM uusan sidii la rabay uga jawaabin.
Sidaa darteed waxaan talo ku doo jeedineynaa in Gudoomiyaha Baarlamaanka iyo xildhibaanada ka soo jeeda Shabeelaha hoose in ay arintaan wax ka qabtaan, inta aysan arimaha faraha ka bixin. Howsha waa mid culus una baahan indho gaar ah in lagu fiiriyo dhibaatooyinka soo noqnoqonaayo ee Gobolka Shabeelaha Hoose.
Waziirka Arimaha Gudaha ee JBM, waxaan kula talineynaa in uu abaabulo ciidan booliis oo suga nabadgalyada Gobolka iyo wadooyinka Shabeelaha hoose . Iyo dib-uheshiisiin deegaanada shaqaaqadaha ka jiraan. Gudoomiyaha Baarlamaanka JBM Dr. Fiqi, waxaa looga fadhiyaa in uu ka shaqeeyo sidii Ciidanka Booliiska Shabeelaha Hoose ee ku xayiran Muqdisho in uu ku dadaalo sidii ay howshooda loogu fasaxi lahaa, lana geeyo Gobolka Shabeelaha Hoose.
Waxaan rajeynayaa in aad arimahaan wax ka qaban doontaan, oo aad si wanaagsan ugu adeegtaan umaddiina inta yar oo aad heysaan masuuliyaddaan culus.
Previous articleDhageyso: Dhalinyarada Shaqa La,aanta Ah Ee kujirta Xiryaha Baracayaasha Magaalada Baydhabo Oo Dalbaneya In Loo Sameeyo Shaqa Abuur.
Next articleTaliye Ciidan Oo Lagu Dhaawacay Dhagxaan Culus Oo Lagu Weeraray